XAFSA: Hababka Aan Cayilka Iskaga Ilaaliyo Nafteydana U Daryeelo - iftineducation.com
iftineducation.com – Jimicsigu waa dawo, noocyada jimicsiga ugu fudud waxaa ka mid ah socodka iyo orodka. waxaa jira daraasado dhowr ah oo iftiimiyay in socodku uu ka hortago cayilka, cudurka macaanka nooca 2-aad, xanuunada wadnaha, faaliga, dhiig karka, xanuunada lafaha iyo dhibaatooyin kale oo caafimaad. Xanuunadaan waxaa badanaa laga qaadaa fadhiga badan iyo jimicsi la’aan.
Waxay khubarada caafimaadku sheegaan in socodku uu wanaajiyo niyada iyo maskaxda qofka islamarkaana uu kordhiyo farxadda.
Akhriso: 30 daqiiqo oo socod ah waxay kaa badbaain kartaa xanuuno aan laga bogsan
Akhriso: Dhibaatooyinka laga qaado fadhiga badan
Xafsa Xassan ayaa bulshada gaar ahaan dumarka Soomaaliyeed kula talinaysa inay naftooda daryeelaan oo ku dedaalaan jimicsiga iyo cuntada nafaqada leh si ay iskaga difaacaan cayilka caafimaadkoodana u horumariyaan.
Ka faaidaysi wacan :